Olontsotra Mpanao Gazety, Miana-draharaha Amin’ny Fandinihana ny Manodidina Azy · Global Voices teny Malagasy
Olontsotra Mpanao Gazety, Miana-draharaha Amin'ny Fandinihana ny Manodidina Azy
Voadika ny 08 Mey 2018 2:47 GMT
Voalohany nivoaka tao amin'ny Rising Voices.
Ny faramparan'ny taona 2007, natolotray ho anareo ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa Neighborhood Diaries (Diarin'ny Firaisana Vodirindrina) izay manofana ireo tanora niangaran'ny vintana monina ao amin'ireo tanàna sahirana ao Kolkata ho lasa olontsotra mpanao gazety.
Tohizantsika ity herinandro ity amin'ny fanasongadinana ny Andro Faha-4 nirosoan-dry zareo tao amin'ny Bow Bazar High School. Nizara tantara momba ireo toerana manamarika nofidian-dry zareo nandritra ny fihaonana teo aloha izy ireo.
Nozaraina ho andiany 3 ireo mpandray anjara, arakaraky izay toerana nofidiany ho toy ny toerana manamarika / malaza – ny hotely Punjabi ao an-toerana, ny Boubazar Kali Mandir ary ny Shiv Mandir.
Tsonga vitsivitsy sy mahavariana momba ny Toerana Malaza Boubazar Kali Mandir:
Fanontaniana vitsivitsy no tonga ao an-tsain'i Rahul:
Ny feon'ireo lakolosy maro, ireo feon'anjomara mampihovitra ny tratrako ny fiantraikany. Tsy mitsahatra ny mamelombelona ny momba ireo andriamanitra ireo pretra. Ireo jiro anatanterahana ny ‘aarti’, ireo feonà ‘mantras’, ireny rehetra ireny dia mampidoboko haingana ny foko avokoa. Ny fofon'emboka manitra mitondra rivotra iainana maivamaivana sy fahatoniana. Ny rivotra malefaka mitsoka ao anatin'ny fofona manitry ny voninkazo mahatonga ny olona ho renodrenoka. Te-handositra ny fitokanàmonina ilay fanahy maizina, saingy mbola manohy mijoro aho, angamba noho ny ‘puja’ mbola mitohy.. Mampanontany tena ahy ny mahita ireo olona milaza zavatra amin'ireo andriamanitry ny tany (andriamanitra hita maso) – inona no ambaran-dry zareo? Amin'iza? Ary nahoana izy ireo no miteny ireny zavatra ireny? Toy ny manao antsapaka no ieritreretako momba io rehetra io, fa mbola manohy mijoro hatrany aho.
Jyotsna Das manolotra ireo sakafo mifandraika amin'ny Puja:
Aorian'ny puja, mihinana prasad ny olona sasany dia avy eo lasa mandeha, raha ny sasany kosa mbola mijanona any aoriana. Lazain'ny rehetra fa tena velona ireo andriamanitra eto. Na inona na inona anontanianao avy amin'ilay reny, azo antoka ny hahazoanao azy. Arahana mozika marobe ilay fetibe fanao isantaona ao an-tempoly. Vao avy nampiakanjoana sari sy firavaka indray ilay andriamanitra. Nampihinanina khichuri ny olona rehetra. Rehefa mivoaka ny mandir ianao, misy mpivarotra kely eo. Eo anilan'io, misy toerana fivarotana lassi. Tena tsara ny rivotra iainana eto.
Miresaka momba an'i Shiv Mandir tranainy, Apurbo no manoritsoritra ny manodidina:
Fihaonan-dàlana efatra mandeha aminà zotra efatra samihafa. Mandritra ny 24 ora ianao dia afaka handre foana ny resak'ireo mpamonjy birao, ny feon'ny lakolosy avy any an-tempoly, feon'ny fiara, ny fofon-trondro, legioma sy hanitra. Etsy anoloana no misy ny Kolejy lehibe fianarana ho mpitsabo ao Kolkata sy ny Hopitaly. Hazo banyan goavana no manemitra azy. Mifanatrika amin'io ny tempoly tranainy Shiv. Fiara fitaterambahoaka goavambe no mifamoivoy amin'ny arabe manoloana azy io. Nandritra ny fahazazàko, rehefa miakatra anaty fiara fitaterana miaraka amin'ny reniko aho ka mankaty, dia afaka nahafantatra hoe tonga ao an-tanànako aho amin'ny fahitàna ity tempoly Shiv ity sy ny Kolejy fianarana ho mpitsabo. Ho ahy, ireo no manamarika ny tanànako.
Avy eo ry zareo nifanakalo hevitra momba ny asa fanaovana gazety sy ny fanoratana bilaogy. Nomena iraka ry zareo handeha any an-tranon'ny mpandray anjara iray hafa (fidiana atao an-tsapaka) mba hitrandraka vaovao misimisy kokoa momba azy ireo. Nilazàna izy ireo haka sary sy hanoratra lahatsoratra iray momba ny trano sy ny fiainana an-tokatranon'ilay olona.
Tamin'ny andro fahadimy, namokatra ny votoatiny ry zareo. Ny tanjona dia ny hoe ampahany avy ao anatiny, ampahany avy any ivelany, fampifandanjàna ny fahalalàna ny eo an-toerana sy ny fomba fijerinà mpanao gazety.
Surojit, momba ny tranon'i Robi:
Ny kaontera no avy hatrany dia hitako vantany vao tafitra tao an-tranon'i Robi aho. Ny efitrano fandroana, tohatra iray eo anilany eo. Nandre fofon-tsakafo nahandroina. Nandre ny feon'ny olona, ny ankizy mikiakiaka. Nokitihako ireo felan'ilay hazo tao. Shefali Mondol no anaran'ny renin'i Robi. Mikarakara tokantrano izy. 18 taona ry zareo no efa nonina teto amin'ity trano ity. Miara-monina amin'izy ireo ny havany, toy ny dadatoa sy nenitoa, ny zanaky ny iray tampo amin'ny ray aman-dreny, dadabe.
Ahoana no andanian'ireo olona ao an-trano ny androny? Manao asa momba ny herinaratra ilay dadatoa efa nahazoazo taona sy ny dadany, ary ilay nenitoa efa zokinjokiny dia ayah ao amin'ny Kolejy fianarana ho mpitsabo. Ankoatra an'io, saika manao ny asa an-tokantrano daholo ny rehetra, ary indraindray mandeha mivoaka hiasa any ivelany.
Firy ny olona ao an-trano? Ao amin'ny efitranon-dry zareo fotsiny, olona telo no monina ao, na dia efapolo aza no fitambaran'ireo olona rehetra mipetraka ao amin'ilay trano.
Vita tamin'ny inona ilay trano? Vita tamin'ny fasika sy simenitra ny trano.
Potsiro eto hahazoanao tantara mahaliana misimisy kokoa.
Ny iraka ho tontosaina amin'ny andro fahadimy dia ny hamantatra momba ireo para, olona mpifanolo-bodirindrina amin'ny mpandray anjara tsirairay avy. Ho an'ny fitsidihana tokantrano ataon-dry zareo, nilazàna izy ireo handeha tsiroaroa ary hitafa aminà olona iray manana ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina.
Tamin'ny andro fahenina no nizaràn-dry zareo ny iraka fitsidihana tokantrano nataony tamin'ny fotoana talohan'io:
Isan'ny tao anatin'ny fandaharana nandritra ny andro ny fikaonandoha momba ny asa fivelomana/indostria eny anivon'ny para (fiarahamoniny). Notenenina ry zareo hikaroka olona iray arakaraky ny asany. Aza mitsahatra manaraka ny bilaogin'ny Neighborhood Diaries mba hahazoana fanavaozana mahaliana kokoa.